Su'aalaha Bad-barashada Luqadda | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Maxaa loogu bilaabayaa luuqad labaad xanaanada caruurta?
Waa maxay qulqulka?
Maxaa loo quusayaa?
Waa maxay saamaynta waxbarashada quusin?
Qaybaha muhiimka ah ee barnaamijkeena
Maskaxda ilmahaagu waxay ku jirtaa heerka ugu wanaagsan ee koritaanka hore ee barashada luqadda, taas oo macnaheedu yahay in ilmahaagu leeyahay labanlaabyo (isku xirnaanta) maskaxda ka badan inta aad adigu leedahay. Isku xirnaantaas waa in la adeegsadaa ama lumaa. Waxaa jira daaqad fursad ah oo cunugaada uu si caadi ah ugu baran karo luuqad kasta oo koowaad. Muddadan ka dib, maskaxdooda ayaa si tartiib tartiib ah u soo dhaweyneysa. Ilmahaagu wuxuu baran karaa inta luqadood ee lagu hadlo inta aad u oggolaanaysaan inay si nidaamsan oo joogto ah wax u maqlaan.
Barashada Luuqada waa qaab loo maro barashada luuqada labaad taas oo waxqabadyada caadiga ah ee barashada lagu qabto luuqad labaad. Taas macnaheedu waxa weeye in luqadda cusubi tahay mid dhexdhexaad ah, iyo waliba shayga la barayo. Fasallada quusitaanka waxay raacaan manhaj isku mid ah, waxayna had iyo jeer isticmaalaan qalab isku turjumaad la mid ah kuwa loo isticmaalo iskuullada aan la-quusin ee degmadooda. Himilada ugu dambeysa ee fasalka luuqaddu waa barashada luuqadda.
Sannadaha hore, macallimiinta quusinta waxay ogyihiin in ardayda aysan fahmi doonin wax kastoo ay dhahaan. Macallimiintu waxay adeegsadaan luuqadda jirka, muuqaalada, walxaha, muuqaalka wajiga ee la buun-buuniyay, iyo is-muujinta muujinta si ay ula xiriiraan macnaha. Xannaanada, waa wax iska caadi ah in ardaydu ay ku hadlaan Ingiriis dhexdooda iyo marka ay u jawaabayaan macallinkooda. Markay sannaduhu socdaan, ardaydu si dabiici ah ayey u isticmaalaan in badan oo ka mid ah luuqadda dhexdeeda. (Fortune iyo Tedick, 2003)
Sida laga soo xigtay Xarunta Cilmibaarista Horukacsan ee Qaadashada Luqadda (CARLA) ee Jaamacadda Minnesota, barnaamijyada wax lagu barto ayaa ah nooca ugu waxtarka badan ee barnaamijka luqadaha ajnabiga ah. Ardayda waxaa laga fili karaa inay gaaraan heerar sare oo aqoon luqad labaad ah marka loo fiiriyo ardayda ku jirta barnaamijyada kale ee luuqada iskuulka ku saleysan.
Daraasad badan ayaa udub dhexaad u ahayd helitaanka luqadda labaad ee iskuullada kala duwan. Soddonkii sano ee la soo dhaafey, ugu horeyntii guusha barnaamijyada quusidda, waxaa jiray isku beddel isku mar ah oo ka yimid barashada luuqadda oo gooni ah iyo xagga isdhexgalka luqadda iyo nuxurka. Isbeddelkani wuxuu ku saleysan yahay afar mabda ':
Luqadda waxaa lagu kasbadaa si wax ku ool ah marka lagu barto macnaha guud ee bulshada. Ardayda wax baraneysa, manhajka dugsiga wuxuu siiyaa aasaas dabiici ah barashada luuqada labaad, iyaga oo siiya fursad ay ugula xiriiraan waxa ay yaqaanaan iyo waxa ay rabaan inay ogaadaan oo ay la socdaan dareenkooda iyo dhaqankooda.
Dhiirrigelinta nuxurku waxay siisaa jawi dhiirrigelin leh barashada howlaha wada xiriirka ee luqad cusub. Carruurta yaryari ma xiiseeyaan barashada luqadda aan u adeegin wax macno leh.
Barashada afka koowaad, garashada iyo wacyiga bulshada waxay kuxirantahay caruurta yar yar. Marka la isku daro luqadda iyo waxa ku jira, barashada luqadda labaad waxay sidoo kale noqoneysaa qayb muhiim ka ah horumarka bulshada iyo garashada ilmaha.
Astaamaha rasmiga ah iyo kuwa shaqeynaya ee luqaddu waxay isu beddelaysaa hal macne iyo mid kale. Luqad isku dhafan iyo moodeel ka kooban qaabka iskuulka aasaasiga ah ayaa bixiya noocyo kala duwan oo macno ah si loogu isticmaalo luqadda labaad.
Hay'ad cilmi-baaris ah oo sii kordheysa oo ku saabsan waxbarashada quusitaanka ayaa muujisay in ardayda immersion ay si joogto ah ula kulmaan ama ka sarreeyaan rajooyinka tacliimeed ee meelaha soo socda:
Xirfadaha luuqadda labaad: Ardayda dhex-dhexaad ka ah ardayda oo si aad ah uga wanaagsan ardayda fasallada afafka qalaad ee soo jireenka ah. Waxay sifiican u yaqaanaan luqadda dhexdeeda waxayna awood u leeyihiin inay la xiriiraan iyadoo loo eegayo da'dooda iyo heerka fasalkooda.
Xirfadaha luqadda Ingiriisiga: Sannadaha hore ee barashada Ingiriisiga (K-2), waxaa laga yaabaa inuu dib u dhac ku yimaado xirfadaha akhriska iyo qorista Ingiriisiga. Marka la gaaro fasalka 5-aad, si kastaba ha noqotee, ardayda wax barataa waxay sidoo kale sameeyaan, ama ka fiican yihiin ardayda fasallada ku kooban Ingiriisiga oo keliya.
Mawduucyada Mawduuca: Ardayda wax ka barata waxay ku guuleystaan aagagga tacliinta iyo sidoo kale ardayda ku jirta barnaamijyada ku baxa Ingiriisiga oo keliya.
Xasaasiyadda dhaqanka: Ardayda wax ku barata waxay si aad ah uga warqabaan, una muujiyaan dabeecad wanaagsan xagga dhaqamada kale.
Luuqada labaad waa luuqada wax lagu barto dhamaan fasaladayada laga bilaabo xanaanada ilaa fasalka 2.
Manhajku wuxuu isbarbar dhigayaa manhajkeena Ingiriisiga ee Degmadeena maadooyinka oo dhan. Ilmahaaga waxaa la bari doonaa inuu wax akhriyo, ku hadlo kuna barto luqadda labaad.
Tilmaamaha tooska ah ee Ingiriisiga ayaa ka bilaabmaya fasalka 3aad ee akhriska, qorista iyo farshaxanka luuqadda ee Ingiriisiga.
Ilmahaaga ayaa sii wadi doona in lagu baro maadooyinka kale luqadda labaad illaa fasalka 5aad.
Ka dib labo ama seddex sano ka dib barnaamijka quusin, cunugaada wuxuu soo bandhigi doonaa ku fiicnaansho iyo xirfadahooda fahamka ayaa la barbar dhigi doonaa kuwa ku hadla afka hooyo ee ay isku da'da yihiin.
Si kastaba ha noqotee, cilmi baaris, ayaa lagu ogaaday in ardayda luuqadda labaad ee ardayda dhigta ay ka maqan yihiin isla saxsanaanta naxwaha, kala duwanaanta iyo kakanaanta ay soo saaraan dadka ku hadla afka hooyo. Gaaritaanka heerkaas xirfadeed waa geedi socod muddada-dheer ah. Aqoonta u eg asalka hooyo meel kasta oo xirfad ah lagama yaabo.
Moodelkeennu si gaar ah ayaa loogu guuleystey marka laga hadlayo gaaritaanka ardayda. Dugsiyo badan oo immersion-ka ah ayaa soo sheegaya in buundooyinka imtixaanka Ingiriisiga laga yaabo inay ka soo dareeraan fasalada 2 - 4 oo ay dib ugulaabtaan fasalka shanaad si ay ula mid noqdaan, ama ka sarreeyaan fasallada aan-dhex-dhexaadka ahayn. Si kastaba ha noqotee, dugsiyadeenna tan kama dhicin. Ardaydeena Bilowga ah waxay u qabtaan si siman barnaamijyada Ingiriisiga dhiggooda ah heerarka fasalada oo dhan. Ballanqaad adag oo ay waalidiintu u qaadaan inay caruurtooda kula akhriyaan af Ingiriis guriga habeen kasta waxay dhammaystiraan waxbarashadeenna gaarka ah ee Ingiriisiga ee fasallada 3 - 5, taas oo keeneysa heerar gaaritaan heer sare ah oo dhammaan ardaydeena. Dhamaadka fasalka shanaad, ardaydeena badankood waxay wax ku akhriyaan Ingiriisiga heerka fasalka 11aad (sida ku cad tallaabooyinka NWEA ee Horumarka Tacliinta).
Xarunta Luuqadaha Lagu Adeegsaday
Xarunta Cilmibaarista Horukacsan ee Barashada Luqadda (CARLA)
Goorma ayuu Gudiga Dugsigu qaatay Nuugista oo ma lagu dayday tusaalayaal kale in si fiican loo xoojiyo fursadaha ardayda oo dhan?
Maxay Degmadu u qaadatay barnaamijka quusinta markii dhowr sano ka hor ay ka saareen fasallada Isbaanishka kharash dartii?
Sidee ayaa labada luuqadood loogu xushay barnaamijyada quusitaanka?
Gundhigga Degmada Minnetonka
Gudiga Dugsiyadeenu waxay qaateen Imtixaanka Luqadda bishii Diseembar, 2006 si ay u bilawdaan Sebtember 2007. Go'aanka wuxuu raacay hanaan ballaaran oo lagu tixgelinayo moodooyinka ugu wax ku oolka badan ee daboolaya baahiyaha ardayda iyo himilooyinka qoysaska ee carruurtooda.
Bishii Oktoobar, 2004, ayaa Degmadu waxay ku casuuntay waalidiinta, xubnaha bulshada iyo shaqaalaha inay kaqeybqaataan guddiyada daraasadda ee moodooyinka waxbarida ee soo socda:
Baccalaureate-ka Caalamiga ah Sanadaha Heerka Dhexe
Xisaabta iyo Sayniska Magnet
Dugsi Dardar Galiyay
Aqoonta Muhiimka ah
Dugsiga Wareega Sanadka
Moodooyinka kale ee laga yaabo inay soo jeediyaan kaqeybgalayaasha daraasadda mustaqbalka
Guddiyada daraasaddu waxay bilaabeen inay soo bandhigaan natiijooyinkooda Maarso, 2005.
In 2007, hordhaca ah ee barnaamijka quusin luqadda cusub waxay siisay fursad ay mar kale ku koraan barnaamij luqadaha aasaasiga ah ee adduunka, laakiin in ka qiimo jaban oo wax ku ool ah ka badan barnaamijka sahaminta hore loo bixin jiray. Fursadaha quusitaanka hadda waa loo wada dhan yahay waxayna u furan yihiin dhammaan qoysaska xanaanada carruurta ee raba inay isqortaan.
Fikradda soo celinta barnaamijkii hore ee luqadda sahaminta ayaa la tixgeliyey; si kastaba ha noqotee, qaabkii hore ayaa ka qaalisan kana waxtar yar xagga barashada luqadda marka loo eego qaabka imika loo adeegsado. Hadafka quusin waa barashada afka. Hadafyada qaabka sahamintu waa soo-gaadhista dhaqanka iyo afka. Qaabka sahamintu wuxuu leeyahay saddex caqabadood oo muhiim ah:
Qiimaha Sare: Qaabkii hore wuxuu ku tiirsanaa takhasusayaasha luuqada ee mid kasta oo ka mid ah iskuulada, taas oo u dhiganta 6 macallin oo dheeri ah oo heer dugsi hoose ah ama qiyaastii $ 300,000. Macallimiinta luqadda waxaa u dheeraa macallimiinta fasalka. Qaabka quusitaanka, macalinka fasalka iyo macalinka luuqada waa isku mid.
Helitaanka luqad xaddidan: Qaabkii hore wuxuu bixiyay wax ka yar hal saac oo ah barashada luqadda / dhaqanka asbuucii. Waxaa loo qaabeeyey, oo sidaas ku xaddidmay, inay noqoto moodal sahamin. Qaab noocan oo kale ah ma taageerayo barashada luqadda. Ardaydu wali waxay galeen dugsiga sare Heerka 1 ee afkooda adduunka. Habka immersion wuxuu kobciyaa barashada luqadda iyo ku-habboonaanta inta lagu jiro dugsiga hoose.
Waqtiga: Ku habboonaanta xulasho kale (sida farshaxanka ama muusikada) waxay qaadataa waqti ka fog tababarka muhiimka ah ee fasalka. Dib-u-eegis dhammaystiran oo arrintan ku saabsan 2000 waxay keentay dib u soo celinta farshaxanka aasaasiga ah, laakiin maaha sahaminta luqadda adduunka. Heerarka sare ee dhammaan ardayda xisaabta, akhriska / farshaxanka luqadda, iyo sayniska waxay u baahan yihiin waqti dheeri ah oo fasalka ah oo ku saabsan mowduucyadaas. Minnesota waxay horeyba uga yarayd maalmaha waxbarida marka loo eego gobollo badan, Mareykankuna wuxuu horey uga haystay maalmo waxbarid ka yar inta badan ummadaha. Qaabka quusitaanka wuxuu ku baraa xisaabta iyo maadooyinka kale luqadda labaad (sameynta luqadda labaad labadaba qaabka, iyo maadada edbinta), isla markaana waqti kama qaadanayo meelaha kale ee maadooyinka ah.
Dadka intiisa badan way layaabaan markay ogaadaan in qaabka quusitaanka uu kayaryahay qaabkeenii hore. Kuwo badan waxay u maleeyaan in barnaamij cusub uu u baahan yahay taageero dhaqaale oo weyn. Xaqiiq ahaan, barashada luqaddu uma baahna ilo dhaqaale oo dheeri ah. Saddex kharash oo dhaqameed oo xagga waxbarashada ah ayaa dhexdhexaad ka ah iyadoo la adeegsanayo Moodelka Af-barashada Luqadda Minnetonka.
Macalimiinta: Ardayda dhigata xanaanada caruurta waxey horeyba ugubaahanyihiin macalin. Barnaamijkan dhexdiisa, waxaan ku qaadaneynaa boos baris oo hadda jira waxaanna u bedeleynaa howshii laga baray af Ingiriisiga iyo waxbarista afka labaad. Tani waa kharash dhexdhexaad ah.
Gadiid: Ka faa'iideysiga fikirka iskuulka gudihiisa, ardaydu waxay dhigtaan iskuulka xaafadooda iyagoon wax qarash dheeraad ah bixin.
Buugaagta Akhriska: Ma jiraan buugaag wax lagu barto inta badan fasallada K iyo Fasalka 1aad; qalabka manaahijtu waa "alaab isticmaal" oo waxay u baahan yihiin in sannad kasta la beddelo. Sidaa darteed, ma jiro kharash dheeri ah maxaa yeelay agabyada ayaa si fudud loogu iibsan doonaa luqaddaas labaad. Fasallada dambe ee dugsiga hoose, iyo fasallada dugsiga dhexe, buugaagta wax lagu barto ayaa loo adeegsadaa. Waxaa jira korsashada buugaagta iyo wareegga beddelka sidaa darteed iibsigu waa qayb ka mid ah wareeggan caadiga ah.
Guddigayaga iyo Maamulka Dugsigeennu waxay aaminsan yihiin in bixinta khibrad luqadeed oo caalami ah markay carruurtu si fiican u awoodaan barashada luqadda ay muhiim u tahay bixinta waxbarasho heer caalami ah.
Isbaanishka waxaa loo xushay caannimada iyo baahsanaanta darteed. Shiineys waxaa loo xushay sababta oo ah laba ka mid ah dugsiyadeennu waxay horeyba u lahaayeen naadiyado iskuul ka dib oo Shiine ah, waxaana jira xiiso badan oo ku saabsan luqadda Shiinaha, labadaba bulshadeena iyo dadaal gobol ahaan. Intaas waxaa sii dheer, Degmadeennu waa hoggaamiye la aqoonsan yahay oo wax lagu barto luuqadda Shiinaha, oo lagu dhigto Dugsiga Sare ee Minnetonka muddo ku dhow labaatan sano. Iskaashigeennii muddada-dheer ee aan la leenahay Barnaamijka Is-dhaafsiga Macallimiinta ee Minnesota-Shiinaha wuxuu u taaganyahay Minnetonka si faa'iido leh si uu u soo jiito macallimiin aqoon sare leh oo ku hadla luuqadda Shiinaha.
Moodel-barashada Luqadda Minnetonka waa mid ku gaar ah Minnesota. Waxa jira ikhtiyaar iskuul-ku-yaal dugsi kasta oo ka mid ah dugsiyada hoose ee Degmadeena. Barnaamijku wuxuu ka bilaabmay 2007 fasalka barbaarinta iyo fasalka 1. Maanta, ardaydeena immersion waxay si guul leh ugu gudbeen dugsiyadeena dhexe iyo dugsiga sare, Degmaduna waxay u heellan tahay taageerida kobaca luqadda adduunka iyada oo loo marayo qalinjabinta.
Qoysaska ka diiwaangashan carruurtooda xanaanada waxaa laga codsanayaa inay ugu yaraan lix sano ballan-qaadaan barnaamijka quusin.
Fasalka 6, ardaydu waxay u guuraan mid ka mid ah dugsiyadeenna dhexe halkaas oo ay ardaydu ugu gudbaan moodeelka sii socoshada. Ardaydu waxay haystaan xannibaad 87-daqiiqo ah oo ah barashada luuqadda labaad ee daboolaysa cilmiga bulshada iyo manhajka luqadda adduunka. Moodelkan ayaa si taxaddar leh loo qaabeeyey si loo hubiyo sii wadista horumarka luqadda quusin iyada oo u oggolaanaysa helitaanka buuxa ee sharafta iyo koorsooyinka xulashada ee dhammaan ardayda.
Fasalka 9aad, ardaydu waxay yeelan doonaan aasaas aad u adag oo ah luuqada labaad waxayna udiyaar garoobi doonaan inay iskaqortaan AP Luuqada iyo Dhaqankooda luuqadooda barashada, iyo waliba koorsooyin luuqada iyo suugaanta oo horumarsan oo lasameeyay fasalada 10-12
Waa maxay sababta Isbaanishka?
Maxaa Shiineys ah?
Haddii Shiinaha lagu baran lahaa heerka dugsiga hoose, sidee carruurtu u baran doonaan xarfaha iyo higgaadda ereyada Ingiriiska? Dhammaan shaqooyinka la qabtay ma waxay noqon doonaan xarfaha Shiinaha?
Tirada dadka Hispanic-ka ayaa ah tirada ugu dhaqsaha badan ee ku soo koraysa gudaha Mareykanka. Tani waxay soo bandhigeysaa fursado waaweyn oo gudaha ah, iyo sidoo kale fursado shaqo oo loogu talagalay xirfadleyda laba-luuqadoodlaha ah.
Maaddaama waddamada Latin America ay xoojinayaan oo ay ballaarinayaan dhaqaalahooda, waxay noqonayaan kuwo aad muhiim ugu ah la-hawlgalayaasha ganacsiga. Dalal badan oo Latin Amerika ah ayaa saxeexay, ama qarka u saaran inay la galaan NAFTA (North American Free Trade Agreement), oo markii hore ay dejiyeen Maraykanka, Kanada iyo Mexico. Tani waa inay sii xoojisaa xiriirka ganacsi iyo ganacsi ee ka dhexeeya dalalkan iyo Mareykanka - taasoo ka dhigaysa luuqadda Isbaanishka xitaa hanti aad muhiim ugu ah dadka Mareykanka ah ee ku jira adduunka ganacsiga.
Shiine waxaa ku hadlaa shan meelood meel dadka adduunka ku nool - kaalinta 1aad ee luqadaha ugu horreeya ee lagu hadlo.
Tan iyo markii Shiinaha uu ku soo biiray Ururka Ganacsiga Adduunka 2001, dowladdeena iyo dowladdeena labaduba waxay ka dhigeen luqadda iyo dhaqanka Shiinaha mid maalgashi muhiim ah.
Joogitaanka dhaqaale ee sii kordhaya ee Shiinaha ayaa kaliya ka dhigi doonta mid muhiim ka ah ganacsiga. Xilligan, Shiinaha wuxuu hayaa qaybta ugu badan ee deynta Mareykanka wuxuuna si dhaqso leh u noqonayaa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan adduunka dhaqaalaha. Ganacsiyo badan oo Minnetonka ah ayaa si joogto ah ganacsi ula sameeya Shiinaha.
Barnaamijyada luuqada Shiinaha ayaa si xawli ah ugu koraya isqorista, 2006-07 ayaa seddex degmo oo deris la ah ay ka bilaabeen barnaamijyada Shiinaha iskuuladooda dhexe ama sare.
Degmadeennu, waxay leedahay taariikh wanaagsan oo soo jireen ah oo lagu barayo Shiinaha muddo ka badan 20 sano waxayna ahayd mid ka mid ah degmooyinkii ugu horreeyay ee Minnesota ku siiya Shiinaha luqad ahaan adduunka. Maanta, in ka badan 150 ardayda dugsiga dhexe iyo sare waxay ku bartaan Shiineeska Minnetonka. Sannad kasta, waxaan martigelinnaa hal ama laba macallin Shiine ah oo ka socda Dugsiga Luuqadda Dibadda ee Hangzhou. Dhanka kale, macallimiinta Minnetonka ayaa wax ku baray Hangzhou.
Mandarin Chinese, oo ah luuqada rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha, waxay isticmaashaa xarfaha Shiinaha iyo pinyin - oo ah xaraf Romanized ama aliphabet ah oo ay si rasmi ah u qaadatay dowladda Shiinaha Ururka Caalamiga ah ee Jaangooyooyinka (ISO) oo ah heerka Romanization ee Shiinaha casriga ah 1979. Carruurta barashada Shiinaha waxay bartaan labada astaamood (astaan ama luuqad ku saleysan sawir) iyo pinyin. Qalabka waxbarida sidoo kale waxaa ku jira xarfaha iyo jilayaasha labadaba.
Barnaamijku ma u furan yahay dhammaan ardayda xanaanada?
Haddii aanan cunugeyga qorin xanaanada, miyaan qori karaa cunugeyga goor dambe, laga yaabee fasalka koowaad ama labaad?
Immisa arday ayaa kuqoran luuqada?
Haa. Guud ahaan, ilmo kasta oo xanaanada ah oo qoyskiisu qiimeeyo barashada luuqad labaad ayaa iska qori kara barnaamijka. Barnaamijyada immersion waxaa loogu talagalay ardayda doonaya inay horumariyaan aqoonta luqadda labaad, halkii ay ka ahaan lahaayeen ardayda durbaba aqoon u leh mid ka mid ah luqadaha quusa. Dhammaan ardayda way uqalmayaan inay kaqeyb qaataan, laakiin ardayda naafada ah ee ka shaqeynta luqadda uma badna inay ku guuleystaan luqad labaad sidaa darteed barnaamijka ku-mashquulinta ayaa laga yaabaa inuusan ku habbooneyn ardaydaas.
Galitaanka barnaamijka quusin waa lagu xadiday kuwa galaya bilowga barnaamijka xanaanada. Si kastaba ha noqotee, ardaydu waxay geli karaan fasalada dambe haddii ay la kulmaan heerar gaar ah oo ay ka gudbaan qiimeynta habboon ee muujineysa aqoonta ku habboon ee luqadda labaad. Tusaale ahaan, ardayda u gudubta Degmadda barnaamij kale oo quusin waa inay lahaadaan aqoon luqadeed oo ku habboon inay ku galaan fasal sare; si kastaba ha noqotee, goobta quusitaanka ma noqon doonto mid waxtar u leh fasalka 3-aad oo aan waligiis waxbarasho ku helin luqada labaad.
Qiyaastii 50% ardayda xanaanada caruurta ee Minnetonka waxay iska qoraan barnaamijka barashada luuqada.
Su'aalaha guud ee ku saabsan barashada luqadda
Ku mashquulka luqaddu ma fikrad cusub baa?
Quusinku ma doorbidaa carruurta oo dhan?
Ma loo baahan yahay asalka luqadda cusub?
Boqolkiiba intee fasal ah ayaad dhihi laheyd ayaa la filayaa inay ahaato luuqada Isbaanishka / Shiinaha?
Sidee carruurtu u bartaan Ingiriisiga?
Door noocee ah ayey waalidku ku leeyihiin dugsiga?
Macallimiintu ma ku hadlaan afkooda?
Waa maxay heerka xirfadeed ee luqadda labaad ay ardaydu yeelan doonaan dhammaadka fasalka shanaad?
Imtixaanka Dugsiga barbaarinta ma noqon doonaa 1/2 maalin ama Maalin Dheeraad ah?
Ma u baahan doontaa macallimiinta luuqadda hoose si ay u haystaan caddeyn ku saabsan barashada luqadda?
Barnaamijka quusitaanka luqadda aasaasiga ah ayaa laga fikiray sida dhaqanka loogu dhex dari doono barashada luqadda?
Fasallada mareenka ee luuqadda aasaasiga ah ma u isticmaali doonaan manhaj isku mid ah fasallada Ingiriisiga keliya lagu barto?
Fasalka ma lagu dhigaa gebi ahaanba Isbaanish, mise Isbaanishku wuxuu noqon lahaa maaddo gaar ah oo la mid ah muusikada, jimicsiga, iwm? Boqolkiiba intee fasal ah ayaad dhihi laheyd ayaa la filayaa inay ahaato luuqada Isbaanishka / Shiinaha?
Sidee bay ardayda Immersion wax uga qabtaan imtixaannada akhriska iyo xisaabta ee gobolka?
Ma jiri doonaa isweydaarsi ardayda iyada oo loo marayo barnaamijka dhexgalka luqadda?
Immersion-ka waxaa laga isticmaali jiray Kanada muddo ka badan 35 sano. Dugsiyada quusin ee Maraykanka ayaa caan ku ah inay noqdaan hab wax ku ool ah oo lagu barto luqadda. Xaqiiq ahaan, fikradda quusitaanka waxay soo jirtay kumanaan sano maadaama ay tahay sida aan dhammaanteen u baranno afkeenna hooyo. Dhexgalka dhexdiisa, barashada luqadda waxaa loo sameeyaa hab dabiici ah oo ardaydu ugu qanacsan yihiin waxbarista. Carruurtu waa jilitaan fiican. Iyagu waa u hammuun badan yihiin, xiiseeyaan isla markaana ka maskax yar yihiin dadka waaweyn marka ay tijaabinayaan oo ay helayaan afaf cusub.
Barnaamijka Bilowgu wuxuu u furan yahay dhammaan carruurta galaya xanaanada. Qoysaska qiimeeya aqoonta luqadda labaad ee ay heleen intii lagu jiray dugsiga hoose waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay iska diiwaangeliyaan barnaamijka Immersion.
Hase yeeshee, quusinku ma aha qof walba. Waalidiin badan ayaa raba in caruurtoodu bartaan luuqada Ingiriiska kahor inta aysan baran luqad labaad. Arday badan ma jecla xiisaha luqadda; damacoodu wuxuu jiifaa meelo kale. Waxaa jira arday fara badan oo heer sare ah oo ka socda Dugsiga Sare ee Minnetonka kuwaas oo qaata oo kaliya heerka aasaasiga ah ee luqadda (oo lagula taliyay gelitaanka kuleejka) oo aan raacsanayn aqoonta. Waxaa jiri doona arday doonaya inay bartaan Faransiis, Jarmal, Jabbaan ama Luqadda Calaamadaha ee Mareykanka oo sugi doona illaa dugsiga dhexe ama dugsiga sare inay bilaabaan luqad. Manhajkeena luqadda aduunka ee dugsigeena dhexe wuxuu u ogolyahay ardayda inay bilaabaan luuqada aduunka ee heerka dugsiga sare maalinta oo dhan, barashada luuqada aduunka ee maalinlaha ah ee fasalka 8-aad.
Waalidiintu way ogyihiin in ilma kastaa u gaar yahay, carruurtuna waxay horumariyaan hibooyin dhinacyo badan: muusigga, luqadda, tirooyinka, farshaxanka muuqaalka ah, dhaqdhaqaaqa, sayniska, iyo garaadka bulshada. Luqaddu waa mid ka mid ah Sirdoonka badan ee aadamuhu hantiyo. Minnetonka, waxaa jira wadooyin badan oo lagu wanaajiyo, meel kasta oo ardaygu hibo u leeyahay iyo danaha waxbarasho. Waalidiinta waxaa lagu dhiirigalinayaa inay diirada saaraan barnaamijka waxbarashadda kaasoo ku habboon ilmahooda. Si kasta oo ay u doortaan, waa ikhtiyaar wanaagsan haddii xulashadaasi ay ku saleysan tahay dabeecadda, qaabka waxbarashada iyo baahiyaha kale ee ilmo kasta. Cunug walba wuxuu ka faa'iideysan doonaa macallimiinteena heer sare dhammaan barnaamijyadeeda waxbarasho.
Iskuulka waxaa loogu talagalay carruurta qoysaska aan ku hadlin Isbaanishka ama Shiinaha. Macallimiintu waxay tixgeliyaan xaqiiqadan markay la xiriiraan waalidiinta oo ay u diraan shaqada guriga. Xiriirka ka dhexeeya guriga iyo dugsiga waa Ingiriisi.
Barnaamijka xanaanada caruurta, waxbarista fasalka waa 100% luuqada labaad. Ardaydu si dabiici ah ayey su'aalo ku weydiin doonaan Ingiriisiga, laakiin macallimiintu inta badan waxay ku jawaabi doonaan luqadda labaad (tilmaamo badan, sawirro, iyo tilmaamo muuqaal ah). Inta lagu jiro fasalka koowaad iyo labaad, ardaydu waxay bilaabaan inay yeeshaan farshaxan, muusig, jimicsi iyo waqtiga xarunta dhexe ee warbaahinta oo ay la leeyihiin khabiiro ku takhasusay aagaggaas; qaaska waxaa lagu dhigaa Ingiriis. Fasalka saddexaad, barashada rasmiga ahi waxay ku bilaabmaysaa Ingiriis (qiyaastii 25% oo ah waxbarista fasalka).
Xilliga xanaanada iyo fasalka koowaad, waxbarista oo dhan waxay ku jirtaa luqadda labaad. Ardaydu way isticmaali karaan Ingiriisiga, laakiin macallimiintooda fasalka ayaa ku jawaaba luqadda labaad. Markay ardaydu caadaysteen inay maqlaan oo fahmaan luqadda labaad, waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay isku muujiyaan luuqadda labaad.
Dugsiga dibaddiisa, waalidiinta waxaa laga codsanayaa inay u akhriyaan ama ula akhriyaan ilmahooda maalin kasta Ingiriis, taas oo ah isla talooyinka la siiyo qoysaska ardayda aan baran.
Fasalka saddexaad, barashada tooska ah ee Ingiriisiga iyo xeeladaha akhriska ayaa bilaabmaya. Ardaydu waxay ku shaqeeyaan xeerarka higgaadinta, qaybaha hadalka iyo xoogaa xirfadaha qorista aasaasiga ah. Qadarka waxbarista farshaxanka luuqada Ingiriisiga ayaa kordheysa fasalada dugsiga hoose.
Ardaydu waxay aakhirka helayaan isla xirfadaha luqadda Ingiriisiga sida ardayda ku jirta goobaha ku kooban Ingiriisiga oo keliya. Heer kasta oo fasal ah, wax u aqrinta iyo la qaadashada cunugaaga guriga waa lama huraan u ah horumarka luqadda cunugaaga.
Ballanqaadka muddada-dheer ayaa lagama maarmaan u ah carruurta inay la kulmaan faa'iidooyinka waaweyn ee ay leeyihiin waxsoosaarka waxbarashadu. Waalidiintu waxay ku taageeri karaan ilmahooda siyaabahan:
Samee ballanqaad waqti dheer ah oo aad ku dhex gasho.
La kobciyo fahamka waxbarashada quusin.
Ku soo bandhig khibrado ka baxsan dugsiga si loo horumariyo xirfadaha luuqadda Ingiriisiga.
Ku dhiirigeli isticmaalka luqadda labaad iskuulka dibadiisa.
Tan ugu muhiimsan, hubi in ilmahaagu dhigto dugsiga maalin kasta.
Iskaa wax u qabso ugu shaqee dugsiga iyo fasalka ilmahaaga.
Fursado iskaa wax u qabso oo kala duwan ayaa ka jira dugsiga. Kaqeybgalka waalidiinta ee howlaha iskuulka waxay muujineysaa cunuga in waxbarashadu ay aad muhiim ugu tahay qoyska.
Macallimiinta quusin qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa inay ku hadlaan afka hooyo, in kastoo aysan taasi ahayn wax shuruud ah. Macallimiintu waa inay haystaan liisanka waxbaridda aasaasiga ah ee Minnesota oo ay aad ugu xeel-dheer yihiin luqadda wax lagu dhigayo. Macallimiinteennu waxay u safreen ama ku noolaayeen dibedda waxayna si fiican u fahmeen dhaqammada kale iyo qiimaha waxbarashada adduunka.
Hadafku waa in ardayda ay si fiican ugu hadlaan luqadda labaad. Waxay sidoo kale yeelan doonaan xirfado aqrin, qorid, iyo dhagaysi ku filan oo ay ku bartaan maadooyinka aasaasiga ah ee tacliinta ee luqadda labaad.
Waalidiintu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay doortaan midkood 1/2 maalin ama Dheeraad-maalin ikhtiyaari ah Barnaamijka Bilowga.
Macallimiinta barashada luuqadda waa inay ahaadaan kuwo shahaadooyin ka haysta waxbarashada aasaasiga ah iyo sidoo kale muujiya aqoon heer sare ah oo luqadda labaad ah.
Dhaqanku wuxuu noqon doonaa qayb muhiim ah oo ka mid ah fasaladayada quusinta. Macallimiintu waxay ku dari karaan dhaqanka casharada, waxqabadyada, alaabta farshaxanka, iyo keenista martida fasalka.
Haa. Fasalladayada Immersion-ka waxaa lagu qaban doonaa isla heerarka maadooyinka ee fasallada kale, barashada isla sayniska, xisaabta, cilmiga bulshada iyo casharada akhriska; hase yeeshe, waxaa lagu bari doonaa luqadda labaad. Waxyaabaha qaaska ah (sida muusikada, farshaxanka, jimicsiga, iyo xarunta warbaahinta) ayaa lagu dhigi doonaa af Ingiriis.
Inta badan maalinta cunugga waxaa lagu dhigaa luuqadda labaad (Isbaanish ama Shiine). Luuqadu waa labadaba qaabka wax loo dhigo iyo maadada wax lagu barayo. Qaaska sida muusikada, warbaahinta, jimicsiga, farshaxanka waxaa lagu baraa Ingiriisiga.
Marka la gaaro fasalka shanaad, ardaydeena Bilowga ah waxay la kulmayaan ama ka badinayaan heerarka aqoonta ee dhiggooda Ingiriisiga ee imtixaannada gobolka.
Is-weydaarsiga ardayda ayaa horumarin kara mustaqbalka; laakiin kuma jiraan sanadka ugu horeeya ee soo jeedinta. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ay sii kordhayaan barnaamijyada quusin ee ku baahsan Minnesota oo dhan, fursadaha is-weydaarsiga maxalliga ah ayaa soo koraya.